भारत र पाकिस्तानबीच आणविक युद्ध भए के होला ? « रिपोर्टर्स नेपाल
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतविरुद्ध आणविक अस्त्र प्रयोगको सम्भावना औल्याए । अल जजिरासँगको अन्तवार्तामा उनले परम्परागत युद्धबाहेकको विकल्पमा आणविक युद्ध हुने बताएका हुन् । के पाकिस्तानले भारतविरुद्ध आणविक अस्त्रको प्रयोग गर्ला ? अस्त्रको प्रयोग गरेमा के होला ? त्यसको जवाफ भारतले कसरी देला ? यो परिकल्पनाको विषय हुनसक्ला ।